နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာသူ ကိုရီးယားနိူင်ငံသား – THE CHAN EDUCATION
Posted on 03/17/2018 03/17/2018 Author The Chan
၁၉၆၆ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက်မှာ လူလောကကို ရောက်လာတဲ့ ကိုရီးယားနိူင်ငံသား တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ နာမည်ကတော့ကင်(မ်)ပုန်းဆူး (Kim Boem-soo) ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သာမာန်လူတန်စား မိသားစုကနေ ဆင်းသက်တာဖြစ်ပေမယ့် လွန်ခဲ့သော၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ သူရဲ့တီထွင်မူကြောင့် ယခုဆိုရင် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ပါပြီ။ ဒီလို တစ်ခဏလေး အတွင်းမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီ အောင်မြင်မူရသလဲဆိုရင်….
ကင်(မ်)ဟာ ၁၉၉၂မှာ တောင်ကိုရီးယား နိူင်ငံရဲ့နံပါတ်တစ် တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ ဆိုလ်းတက္ကသိုလ် မှာ ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယား ဘာသာရပ်ဖြင့်မဟာဘွဲ့ ရယူပြီ၊ ဆမ်းဆောင်းကုမ္ပဏီမှာ ၆နှစ်ကြာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ထွက်ပြီနောက် ဟန်းဂိမ်းကို ကိုယ်တိုင် တီင်္ထွင်ခဲ့တယ်။ ဒီတီထွင်မူဟာ သူရဲ့ဘာဝမှာ ပထမဆုံး တီထွင်မူဖြစ်သလို ပထမဆုံး ခြေလှမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ တီထွင်မူကြောင့် ကိုရီးယား ကွန်ပြူတာလောကမှာ သူ နာမည်ရလာပါတယ်။ ဒီတီထွင်မူရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တီထွင်မူကတော့ နာဗာ တီထွင်မူ ဖြစ်ပါတယ်။ နာဗာဆိုတာ Google လိုမျီုး ကိုရီးယားနိူင်ငံသားတွေ အသုံးပြုတဲ့Search Engine ဖြစ်ပါတယ်။ အစမှာတော့ Naver ဟာ Google, Yahoo လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ယခုဆိုရင် Naver ဟာ ကိုရီးယားနိူင်ငံသားတွေ အသုံးများဆုံး Search Engine (or) Browser ဖြစ်လာပါတယ်။ နှစ်စဉ် သူတို့ ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် Naver Map, Naver Taxi, Naver TV, လိုမျိုးတောင် Naver မှာ ကြည့်လို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Park Quen Hye, Kakao Ins သွားရောက်တုန်း အမှတ်တရ
ဒါပေမယ့် ကင်မ် ကတော့ Naver company ကနေ ၂၀၀၆မှာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်တဲ့ ပြသနာကြောင့် ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇မှာ အမေရိကန်ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်ပြီ အမေရိကန်မှာ ၂၀၁၀နှစ်ထိ နေခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကနေ ပြန်လာပြီနောက်မှာ Kakao Talk ဆိုတဲ့ Messenger တစ်မျိုးကို သူတီထွင်လိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါ သူရဲ့တီထွင်မူတော့ ကိုရီးယား နိူင်ငံသားများအတွက် တောတောလေးကို အသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Kakao Talk ဟာ ကိုရီယားနိူင်ငံသား ၁၀၀%ထဲ မှာ ၉၆%က အသုံးပြုတဲ့ Messenger ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုရင် kakao Talk Inc ဟာ ကိုရီးယားမှာ ၀င်ငွေအများဆုံး အဆင့်ဆီကို သွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Forbes Megazine စာတမ်းအရ kakao Talk ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မူဟာ $ 3.2B ရှိပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ kakao Talkမှာ ငွေလည်း လွဲနိူင်သလို၊ သတင်း၊ တီဗီ၊ လက်ဆောင်တွေကိုပါ ပေးလို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပေးနည်းကတော့Code Numberနှင့် သွားနေတာ ဖြစ်တယ်။ ကော်ဖီတောင် တိုက်လို့ရပါတယ်.
ကင်မ် ကတော့ သူရဲ့ အစွမ်းစကြောင့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကိုရီးယားနိူင်ငံရဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး ထိပ်ဆုံး ၁၀ စာရင်းဝင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့တီထွင်မူဟာ ကိုရီးယားနိူင်ငံအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ တီထွင်မူ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in knowledge, Koea, Lifestyle•Tagged Korea, Technology•LeaveaComment on နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာသူ ကိုရီးယားနိူင်ငံသား